Grand Canyon Jewels: El Tovar Hotel na ụlọ ahịa onyinye onyinye Hopi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Grand Canyon Jewels: El Tovar Hotel na ụlọ ahịa onyinye onyinye Hopi
Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
by Stanley Turkel CMHS nkwari akụ-online.com
dere Stanley Turkel CMHS nkwari akụ-online.com
Otu narị afọ na iri na isii gara aga, ihe ịchọ mma ụlọ abụọ mepere na Grand Canyon National Park: ụlọ El Tovar dị ọnụ ụlọ 95 na ụlọ ahịa onyinye onyinye Hopi dị n'akụkụ. Ha abụọ gosipụtara nleba anya na ọchụnta ego nke Frederick Henry Harvey nke azụmahịa ya gụnyere ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụgbọ ala iri nri ụgbọ okporo ígwè, ụlọ ahịa onyinye, na ebe a na-edebe akụkọ.
Mmekọrịta ya na Atchison, Topeka na Sante Fe Railway webatara ọtụtụ ndị njem nlegharị anya na Southwest America site n'ime ka njem ụgbọ oloko na iri nri dị mma na ihe egwu. N'iji ọtụtụ ndị na-ese ihe nkiri America, Fred Harvey Company chịkọtakwara ihe atụ nke nkata ụmụ amaala, ihe beadwork, kachina dolls, pottery, na textiles. A maara Harvey dị ka "Civilizer of West."
Ogologo oge tupu US Congress họpụtara ndị Nnukwu Ọdụ Mba nke Canyon na 1919, ndị njem nlegharị anya mbụ bịara site n'ọdụ ụgbọ mmiri wee nọrọ abalị n'ụlọikwuu, ụlọ, ma ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ mbụ nke azụmahịa. Agbanyeghị, mgbe Atchison, Topeka na Sante Fe Railway meghere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo na South Rim nke Grand Canyon, ọ kpatara ụkọ ụlọ zuru oke. N'afọ 1902, Sante Fe Railway nyere iwu ka e wuo El Tovar, ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke mbụ nke nwere akụkọ anọ nke Chicago architect Charles Whittlesey mere nke nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị ọnụ ụlọ. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ riri $250,000 iji wuo ya ma bụrụkwa ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha mma na ọdịda anyanwụ nke Osimiri Mississippi. Akpọrọ ya aha "El Tovar" iji sọpụrụ Pedro de Tovar nke njem Coronado. N'agbanyeghị ihe ndị dị n'ime ya, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ nwere igwe ọkụ ọkụ ọkụ nke na-enye ọkụ eletrik, okpomọkụ uzuoku, mmiri na-ekpo ọkụ na oyi na mmiri ọkụ na ime ụlọ. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ọnụ ụlọ ndị ọbịa nwere ụlọ ịsa ahụ nkeonwe, ndị ọbịa na-eji ụlọ ịsa ahụ ọha na eze na nke ọ bụla n'ime ala anọ ahụ.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ nwekwara ụlọ griin ha ga-esi na-akụ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọhụrụ, ụlọ ọkụkọ na otu anụ mmiri ara ehi iji nye mmiri ara ehi ọhụrụ. Ngosipụta ndị ọzọ gụnyere ebe a na-akpụ isi, solarium, ogige dị n'elu ụlọ, ọnụ ụlọ billiard, ụlọ nka na egwu yana ọrụ telegraph Western Union na ọnụ ụlọ.
Ewubere ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọhụrụ ahụ tupu Grand Canyon ghọrọ ogige mba Federal echedoro na-esochi nleta Onye isi ala Theodore Roosevelt na 1903 na Canyon. Roosevelt kwuru, "Achọrọ m ịrịọ gị ka ịme otu ihe n'ihe metụtara ya maka ọdịmma nke gị na maka obodo - idobe nnukwu ihe ebube nke okike dị ka ọ dị ugbu a ... Enwere m olileanya na ị gaghị enwe ụlọ nke ụlọ. ụdị ọ bụla, ọ bụghị ụlọ okpomọkụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, iji mebie ịdị ebube magburu onwe ya, ịdị elu, ọmarịcha ịhụnanya na ịma mma nke Canyon. Hapụ ya ka ọ dị. Ị nweghị ike imeziwanye ya. "
Ewubere ụlọ oriri na ọṅụṅụ Fred Harvey ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 kilomita n'akụkụ okporo ụzọ Sante Fe site na Kansas, Colorado, Texas, Oklahoma, New Mexico na California. O jiri "Harvey Girls" rụọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ya, ụmụ agbọghọ ndị a na-ewe n'ọrụ n'ofe US nwere "ezi omume ọma, ma ọ dịkarịa ala agụmakwụkwọ klas nke asatọ, àgwà ọma, okwu doro anya na ọdịdị dị mma." Ọtụtụ n'ime ha mechara lụọ ndị na-azụ anụ na ndị na-achị ehi ma kpọọ ụmụ ha "Fred" ma ọ bụ "Harvey". Onye ọchị ọchị Will Rogers kwuru banyere Fred Harvey, "O debere ọdịda anyanwụ na nri na ndị nwunye."
E debere El Tovar na National Register of Historic Places na September 6, 1974. E kwuru na ọ bụ National Historic Landmark na May 28, 1987 ma bụrụ onye so na Historic Hotels of America kemgbe 2012. Ụlọ nkwari akụ ahụ anabatala ndị na-egbuke egbuke dị ka Albert. Einstein, Zane Grey, Onye isi ala Bill Clinton, Paul McCartney, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Ewubere ụlọ ahịa ihe onyinye Hopi House (1905) ka ọ gbakọta na gburugburu agbataobi wee mee ka ụlọ Hopi pueblo jiri ihe okike mpaghara dị ka nkume ájá na osisi junipa na-ewu ya. Ọ bụ ezie na El Tovar kwadoro ụtọ ụtọ dị elu, Hopi House nọchitere anya mmasị na-apụta na nka na nka Southwwest India nke ụlọ ọrụ Fred Harvey na Sante Fe Railway kwalitere.
Emebere Hopi House site n'aka onye na-ese ụkpụrụ ụlọ Mary Jane Elizabeth Colter na-amalite mkpakọrịta na ụlọ ọrụ Fred Harvey na National Park Service nke dịruru ihe karịrị afọ 40. Emebere ya ma wuo ya ka ọ bụrụ ebe a na-ere ihe osise India. Ọ natara enyemaka nke ndị na-ese Hopi site n'obodo nta dị nso ka ha nyere aka wuo ihe owuwu ahụ. Colter gbara mbọ hụ na ime ime ahụ gosipụtara ụdị ụlọ Pueblo dị na mpaghara. Obere windo na elu ụlọ dị ala na-ebelata ìhè anyanwụ nke ọzara siri ike ma na-eme ka ahụ dị jụụ ma dị mma n'ime ime. Ụlọ ahụ na-agụnye niche mgbidi, ebe a na-ekpo ọkụ nkuku, mgbidi adobe, ihe osise ájá Hopi na ebe ịchụàjà emume. A na-esi n'ite ite ndị gbajiri agbaji eme chimni ndị a chịkọtara ma gbakọta ọnụ.
Mgbe ụlọ ahụ meghere, ụlọ nke abụọ gosipụtara nchịkọta ihe mkpuchi ochie nke Navajo, bụ́ ndị meririla nnukwu ihe nrite na 1904 St. Louis World's Fair. Ngosipụta a mechara bụrụ Fred Harvey Fine Arts Collection, nke gụnyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 5,000 iberibe nka nka ndị America. Nchịkọta Harvey gara United States, gụnyere ebe ndị a ma ama dị ka Field Museum na Chicago na Carnegie Museum na Pittsburgh, yana ebe mba ụwa dị ka ebe ngosi nka Berlin.
Ụlọ Hopi, mgbe ahụ na ugbu a, na-enye ụdị nkà na nka dị iche iche nke ndị America maka ọrịre: ite na ihe osise osisi ndị a na-edozi na counter ndị a na-etinye na blanket Navajo nke ejiri aka kpara akpa na akwa akwa, nkata ndị e kokwasịrị n'osisi osisi peeled, kachina dolls, masks emume, na ihe osise osisi na-enwu site n'ìhè na-ekpo ọkụ nke obere windo ihe owuwu ahụ. Mgbidi Hopi na-achọ mgbidi steepụ ahụ mma, ihe arịa okpukpe sokwa n'otu ọnụ ụlọ arụsị.
Ụlọ ọrụ Fred Harvey kpọrọ ndị omenkà Hopi ka ha gosi otú ha si arụ ọla, ite, blanketị, na ihe ndị ọzọ a ga-ejizi ere ahịa. N'aka nke ọzọ, ha nwetara ụgwọ ọrụ na ebe obibi na Hopi House, ma ọ dịghị mgbe ha nwere ụlọ Hopi, a naghịkwa ekwe ka ha resị ndị njem nleta ngwa ahịa ha. N'ọgwụgwụ 1920s, Fred Harvey Company malitere ikwe ka ụfọdụ ndị Hopi India banye n'ọkwa nke azụmahịa. A goro Porter Timeche ego ka ọ gosipụta ịkwa akwa akwa mana ọ na-enwe mmasị n'ịkparịta ụka n'etiti ndị ọbịa nke na ọ naghị esiri ya ike ree blanketị, mgbe ahụ e nyere ya ọrụ dị ka onye na-ere ahịa n'ụlọ ahịa onyinye onyinye Hopi House. O mechara jee ozi dị ka onye na-azụ ahịa maka nkwenye Fred Harvey na Grand Canyon. Fred Kabotie, onye omenkà ama ama nke sere ihe osise akụkọ ifo Hopi Snake n'ime Desert View Tower, jikwaa ụlọ ahịa onyinye na Hopi House n'etiti 1930s.
Site na a ma ama nke Ụlọ Hopi, ọtụtụ ndị ọbịa nwere ike iche na ndị Hopi bụ nanị ebo ndị dị na Grand Canyon, ma nke a abụghị eziokwu. N'ezie, taa 12 dị iche iche a na-amata na agbụrụ dị iche iche XNUMX nwere njikọ omenala na Canyon, National Park Service na-arụkwa ọrụ iji nabata mkpa omenala nke ndị ọzọ a.
A họpụtara Ụlọ Hopi ka ọ bụrụ National Historic Landmark na 1987. N'oge mmezigharị zuru oke na 1995, ndị ọkachamara Hopi sonyere na mbọ mweghachi ahụ ma nyere aka hụ na ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ihe owuwu ụlọ ma ọ bụ ihe nhazi mbụ gbanwere. Ụlọ Hopi na Lookout Studio bụ isi ihe na-enye aka na Grand Canyon Village National Historic Landmark District.
Foto nke STANley
Ọnye na -bụ Stanley Turkel? edepụtara dị ka 2020 Historian of the Year site na Historic Hotels of America, mmemme mmemme nke National Trust for Historic Preservation, nke a na-akpọbu aha ya na 2015 na 2014. Turkel bụ onye mgbasa ozi ụlọ oriri na ọ publishedụ -ụ na-ebipụta na United States. Ọ na-arụ ọrụ ịgba izu n'ụlọ nkwari akụ ya na-eje ozi dị ka onye akaebe mara ama n'okwu metụtara ụlọ nkwari akụ, na-enye njikwa akụ na nkwanye ikike ụlọ oriri na ọ hotelụ. Akwadoro ya dika Master Hotel Supplier Emeritus site na Educational Institute of the American Hotel and Lodging Association. [email protected] 917-628-8549
E bipụtara akwụkwọ ọhụrụ ya bụ "Great American Hotel Architects Volume 2".
Akwụkwọ ndị ọzọ a bipụtara na họtel:
• Nnukwu ndị ọbịa ụlọ oriri na ọ Americanụ Americanụ America: Ndị ọsụ ụzọ nke ụlọ ọrụ nkwari akụ (2009)
• Ewubere Ikpeazụ: Otutu ụlọ oriri afọ 100 dị na New York (2011)
• Ewubere ka ọ bụrụ nke ikpeazu: Hotellọ Afọ 100+ Ọwụwa Anyanwụ Mississippi (2013)
• Ụlọ nkwari akụ Mavens: Lucius M. Boomer, George C. Boldt, Oscar nke Waldorf (2014)
• Nnukwu ndị ọbịa ụlọ oriri na ọ Americanụ Americanụ America Mpịakọta nke 2: Ndị ọsụ ụzọ nke ụlọ ọrụ nkwari akụ (2016)
• Ewubere ka ọ bụrụ nke ikpeazu: Hotellọ Afọ 100+ West nke Mississippi (2017)
• Ụlọ nkwari akụ Mavens Mpịakọta 2: Henry Morrison Flagler, Osisi Henry Bradley, Carl Graham Fisher (2018)
• Ụlọ nkwari akụ: Mpịakọta 3: Bob na Larry Tisch, Ralph Hitz, Cesar Ritz, Curt Strand
Akwụkwọ ndị a niile nwere ike ịnye iwu site n'aka Onye edemede site na ịga stanleyturkel.com na ịpị aha akwụkwọ ahụ.
Stanley Turkel CMHS nkwari akụ-online.com